Ukungenisa uxinzelelo ekunciphiseni iindawo ezingenanto kunye ne-IGBT MF ye-induction heater
Uxinzelelo loxinzelelo Sisebenza kuzo zombini ii-alloys zentsimbi kunye nezingatyisiyo kwaye senzelwe ukususa uxinzelelo lwentsalela yangaphakathi eveliswa ziinkqubo zangaphambili zokuvelisa ezinje ngomatshini, ukuqengqeleka okubandayo kunye nokudibanisa iwelding. Ngaphandle kwayo, ukwenziwa okulandelayo kunokubangela ukuphazamiseka okungamkelekanga kunye / okanye izinto ezinokubakho kwiingxaki zenkonzo ezinje ngokuqhekeka koxinzelelo. Unyango ayenzelwanga ukuvelisa utshintsho olubonakalayo kulwakhiwo lwezixhobo okanye iipropathi zoomatshini, kwaye ke ngenxa yoko ngesiqhelo kuthintelwe kumaqondo obushushu asezantsi.
Iicarbon steels kunye nealloy steels zinokunikwa ngeendlela ezimbini zokuphelisa uxinzelelo:
Unyango ngo-1-150 ° C luthomalalisa uxinzelelo oluphezulu emva kokuqina ngaphandle kokunciphisa kakhulu ubulukhuni (umzekelo, izinto ezilukhuni, iibheringi, njl.
2. Unyango ngo-600-680 ° C (umz. Emva kokuwelda, ukutyabeka njalo njalo) kubonelela ngoxinzelelo olupheleleyo.
Uxinzelelo lokukhulula isithuba esenziwe ngentsimbi yecarbon kwinqanaba le-30 yeenyawo / 9.1 yeemitha ngomzuzu ukunciphisa ubunzima kwi2 "/ 51mm engaphandle kwicala ngalinye ukuphelisa imiba yokuqhekeka ngemveliso yokugqibela
Isixhobo: Ikhabhoni yentsimbi engenanto (5.7-10.2 ”/ 145-259mm ububanzi kunye no-0.07-0.1” /1.8-2.5mm ubukhulu)
Ukushisa: 1200 ºF (649 ºC)
Rhoqo: I-30 kHz
Induction Izixhobo zokufudumeza: I-HLQ 200kW 10-30 kHz inkqubo yokufudumeza ngaphakathi ifakwe kwisikhululo sobushushu esikude esinee-10 μF
-Iindawo ezininzi zokwahlulahlula i-coil zokufudumeza ezenziweyo kwaye zaphuhliswa ngokukodwa kwesi sicelo
Inkqubo yeCarbon yentsimbi ethe tyaba iya kuhamba nge-coil yoqheliso kwinqanaba le-30 yeenyawo / i-9.1 yeemitha ngomzuzu ukucaphuka okanye uxinzelelo kunciphisa ikhabhoni yentsimbi. Ngexesha lale nkqubo, i-carbon yentsimbi iya kutshisa iye kwi-1200 ºF (649 ºC). Oku kuyakwanela ukususa ukuqina komsebenzi ukusuka ku-2 "/ 51mm kwicala ngalinye lobubanzi.
Isantya: Ukuchithwa ngokukhawuleza kushushu i-carbon carbon kwiqondo lokushisa, okwenza izinga leenyawo ezingama-30 ngomzuzu
-Ukusebenza: Ukutshisa ukutshisa ayigcini kuphela ixesha lokuvelisa, ikonga iindleko zamandla
–Footprint: Uqheliso luthatha indawo ebonakalayo, ukuze kube lula ukuphunyezwa kwiinkqubo zemveliso ezinje
Unyango ngokwesiqhelo i-150-200 ° C isusa uxinzelelo oluphezulu emva kokuqaqanjelwa ngaphandle kokunciphisa kakhulu ubunzima (umz. Izinto ezinobunzima, iibheringi, njl.
Unyango ku-600-680 ° C (umz. Emva kokuwelda, ukutyabeka njalo njalo) kubonelela ngoxinzelelo olupheleleyo.
Ii-alloys ezingezizo-ferrous zixinzelelekile kuxinzelelo kumaqondo obushushu ahlukeneyo ahambelana nohlobo lwealloy kunye nemeko. Iialloys ezibe lukhuni kubudala zithintelwe kuxinzelelo lokukhulula amaqondo obushushu angaphantsi kobushushu obugugayo.
I-Austenitic steels ezingenazintsimbi zixinzelelekile zingaphantsi kwe-480 ° C okanye ngaphezulu kwe-900 ° C, amaqondo obushushu phakathi kokunciphisa ukumelana nokubola kumabakala angaqinisekanga okanye aphantsi kwekhabhoni. Unyango olungaphezulu kwe-900 ° C zihlala zizisombululo ezizeleyo.
Ukwenza ulungelelwaniso kusetyenziselwe ezinye, kodwa ayizizo zonke, iinyithi zobunjineli, ukumisa okuqhelekileyo kunokuthambisa, kuqinise okanye kuxinzelelo kunciphise into, kuxhomekeke kwimeko yayo yokuqala. Injongo yonyango kukuchasana nefuthe leenkqubo zangaphambili, njengokuphosa, ukubumba okanye ukuqengqa, ngokucokisa ulwakhiwo olungalinganiyo lube lolunye olonyusa ukungabinakho ukusebenza / ukwenzeka okanye, kwiifom ezithile zeemveliso, luhlangabezana neemfuno zokugqibela zepropathi.
Injongo ephambili kukumisa isinyithi ukuze, emva kokubumba okulandelayo, icandelo liphendule ngokwanelisayo ekusebenzeni okomeleleyo (umz. Ukunceda uzinzo lobukhulu). Ukulungelelanisa kubandakanya ukufudumeza isinyithi esifanelekileyo kubushushu obuqhelekileyo kuluhlu lwe-830-950 ° C (phezulu okanye ngaphezulu kobushushu obomeleleyo bezinyithi ezomeleleyo, okanye ngaphezulu kobushushu be-carburising bee-carburising steels) emva koko zipholise emoyeni. Ukufudumeza kuhlala kuqhutywa emoyeni, ke ukwenziwa koomatshini okulandelayo okanye ukugqitywa komphezulu kuyafuneka ukuze kususwe isikali okanye umaleko otyhafileyo.
Izinyithi ezomisa umoya (umz. Ezinye izitishi zegiya elibizwa ngokuba yi-automotive gear) zihlala “ziqhutywa ngumsindo” (zihlonyelwe ngokwemiqathango) emva kokuqhela ukuthomalalisa ulwakhiwo kunye / okanye ukukhuthaza ukusetyenziswa kwamandla. Ukucaciswa kweenqwelomoya ezininzi kukwafuna olu dibaniso lonyango. Iintsimbi ezingaqhelekanga ngesiqhelo zezo zinokuba lukhuni kakhulu ngexesha lokupholisa umoya (umzekelo, izixhobo ezininzi zentsimbi), okanye ezo zingafumani nzuzo kulwakhiwo okanye zivelise izakhiwo ezingafanelekanga okanye iipropathi zoomatshini (umz. Iintsimbi ezingenasici).
iindidi Teknoloji tags uxinzelelo lwentsimbi yekhabhoni, Ukukhutshwa kobushushu koxinzelelo, induction Ukufudumeza uxinzelelo kuxinzelelo, uxinzelelo lokuxinwa, Uxinzelelo loxinzelelo, ukukhulula uxinzelelo, uxinzelelo ekunciphiseni iindawo ezingenanto, Inkqubo yokunciphisa uxinzelelo Post yokukhangela